Dhallinyaro u istaagay inay Soomaaliya ka dhigaan mid cagaaran oo nabad ah | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Dhallinyaro u istaagay inay Soomaaliya ka dhigaan mid cagaaran oo nabad ah
Posted by: Ahmed Haaddi May 28, 2022
Himilo – 50 dhalinyaro ah oo isugu jira kuwo dhameeyay jaamacado, iskuullo iyo kuwo weli dhigta oo wiilal iyo gabdho leh kuwaas oo kala jooga Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa wada olole dadka loogu sheegayo inay degaankooda ka ilaaliyaan xaalufinta iyo adeegsiga bacaha.
Dhallinyaradan ayaa sheegay inay saameynta isbeddelka cilmida Soomaaliya soo gaartay, waxay u cuskadeen abaaraha oo ay sheegeen inay hadda noqdeen kuwo isku xig-xiga halka waagii hore ay u dhaxeyn jireen ugu yaraan shan sano iyo ka badan.
Waxay aaminsan yihin dadka Soomaaliyeed inaysan ku baarugsaneyn in dhibaatada degaanadooda ka jirta ay iyagu kaalin ku leeyihiin maadaama ay qaarkood ku hawlan yihiin jaridda dhirta oo la sheego inay dhulka ka ilaaliso nabbaadguurka iyo roob la’aanta.
Xubnaha dhallinyarada ee Muqdisho iyo gobolada kala jooga waxay si gaar ah u sameeyaan kulamo ay dadka ku wacyi geliyaan inay degaanka u dhowraan sida gurigooda oo kale, waxay wadaan sidoo kale mashruuc goobaha danta guud ay ugu beerayaan geedo iyagoo la kaashanaya ardayda iskuulada iyo jaamacadaha, waxay arday kasta u booriyaan ka hor qalin jebintiisa inuu geed beero.
Dhallinyaradan oo ku mideysan madasha Somali Greenpeace Association ayaa u shaqeeya si isxil qaan (lacag la’aan ah), ujeedadooda ayay ku sheegeen inay doonayaan in Soomaaliya ay noqoto dalka cagaaran oo nabad ah.
Previous: Dowladda France oo 7,000 oo askari u diyaarisay amniga Garoonka ay isku wajahayaan Madrid iyo Liverpool
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 203aad